युगसम्बाद साप्ताहिक - देशको शासन–प्रशासन हेर्ने मेरो काम होइन – राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव
Tuesday, 01.21.2020, 12:18am (GMT+5.5) Home Contact
देशको शासन–प्रशासन हेर्ने मेरो काम होइन – राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव
Monday, 04.29.2013, 07:17pm (GMT+5.5)
० गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिका रुपमा तपाई सफल कि असफल ?
देशवासीको आशीर्वादले म अहिले जुन ठाउँमा म छु त्यस बाटोमा देशको सफलता नै मेरो पनि सफलता हुुन्छ । जुन बाटोमा हामी अहिले गैरहेका छौं, सबैलाई मिलएर संविधानसभाको निर्वाचनतर्फ गैरहेका छौं यस बाटोमा हामी सबै जानुपर्छ । अघिल्लो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसके पनि शान्ति प्रक्रियाको काम सम्पन्न भएको छ । अब हामी सबै राजनीतिक शक्तिलाई मिलेर संविधानसभाको निर्वाचन भाग लिएर सार्वभौमसत्ता सम्पन्न ‘हाउस’ खडा होस् भन्ने राष्ट्राध्यक्षको नाताले मेरो चाहना छ ।
० यो चार वर्षसम्म संविधानसभा पनि जोगाउन सक्नुभएन र संविधान पनि जारी भएन । राष्ट्राध्यक्षको नाताले त्यो जिम्मेवारी त तपाईको पनि होइन र ?
निश्चय नै त्यो मेरो पनि जिम्मेवारी हो । तर कहिलेकाहीं के हुन्छ भने कतिपय काम कुरा गर्दागर्दै पूरा हुन सक्दैन । जति भएको छ सबै नकारात्मक मात्र भएका छैनन् । थुपै्र समारात्मक काम पनि भएका छन् । संविधानसभाले संविधान मात्र दिन नसकेको हो । शान्ति र द्वन्द्वका धेरै कुराहरू हामीले सुल्झाइसकेका छौं । हामी अहिले पनि सही बाटोमै छौं । जनता सार्वभौम हो । लोकतान्त्रिक बाटोमा अगाडि बढ्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो । राष्ट्राध्यक्षका नाताले मेरो आग्रह छ कि सबैले चुनावमा भाग लिइदिएर सार्वभौमसत्ता सम्पन्न एउटा सभा खडा गरेर संविधान बनाउनु नै अहिलेको आवश्यकता छ ।
० तपाईले निर्वाचनलाई बढी जोड दिइरहनुभएको छ तर पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले त राष्ट्रपतिले चार पटक कु गर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो भन्ने आरोप लगाउनुभएको छ नि ?
राष्ट्राध्यक्षको नाताले मैले अहिले यसमा टिप्पणी गर्नु आवश्यक छैन । तर तपाईंहरू मुलुकको घटना, परिघटनाहरूमाथि अवगत हुनुहुन्छ । सेना लगाएर कु गर्ने सोचको म जहिले पनि विपक्षमा रहँदै आएको छु । कानुनको शासनलाई नै मैले सर्वोपरि ठानेको छु ।
० भन्नेहरू त यहाँले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन नपाएर मात्रै रोकिएको पनि भन्छन् नि ?
हैन, यसमा धेरै टाढा नजाऔं । नेपाली जनताको बलिदानीले जुन गणतन्त्र आयो त्यसमा पनि हाम्रा छरछिमेक र मित्र राष्ट्रहरूले स्वीकार गरेका छन् । अहिले पनि मैले जुन बाटो लिएको छु त्यसप्रति २४ देखि ४८ घण्टाको बीचमा हाम्रा छिमेक र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले साथ दिएका छन् । त्यसकारण मलाई लाग्छ कि– सबैको सदभाव र सहयोगले हामी अगाडि बढ्ने हो ।
० तपाई सेनाको परमाधिपति भए पनि सेनाले समेत साथ नदिएको भनिन्छ नि ?
म लोकतान्त्रिक पद्धतिको मान्छे । मलाई अहिलेसम्म लाग्छ कि देशको बाटो अप्ठ्यारो छ तर हामी सही ठाउँमै पुग्छौं । देशको शासन–प्रशासन हेर्ने मेरो काम होइन । मैले त राजनीतिक दहरूसंग मात्र ‘डिल’ गर्ने हो । सुरक्षा निकाय र अन्य प्रशासनिक काम सरकारले गर्ने हो । हो सरकार मेरो हातमा त छ तर मलाई के लाग्छ भने हामी संगसंगै हिंडिरहेका छौं । मलाई सबैले सहयोग गरिरहेका छन् ।
० अलिक फरक प्रसंग, यहाँले मित्रराष्ट्र भारतको तीनपटक भ्रमण गर्नुभयो तर भारतका प्रधानमन्त्री नै नेपाल नआएको डेढ दशक बितिसक्यो । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
मेरो राजकीय भ्रमणका बेला मैले त्यहाँका राष्ट्रपतिलाई नै नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएको थिएँ । अब तीनपटकको भ्रमणको कुरा गर्दा दोस्रोपटक १७७ वर्ष पुरानो विश्वविद्यालय, जहाँ मैले पनि अध्ययन गरेको थिए त्यसको कार्यक्रमका लागि गएको हुँ । पछिल्लोपटक वनारस हिन्दु विश्वविद्यालको दिक्षान्त समारोहमा गएको थिए । त्योसम्म गरेर तीनपटक भारत भ्रमण भएको हो । मेरो कार्यकालमा एकचोटी औपचारिक र दुईचोटी अनौपचारिक भ्रमण भएको हो । यसबीचमा भारतका अहिलेका राष्ट्रपतिलाई पनि नेपाल भ्रमणको चाँजो पाँजो मिलाउन मैले सरकारलाई भनेको छु । त्यसै गरी चीनका अहिलेका राष्ट्रपतिलाई पनि मेरो तर्फबाट र राष्ट्रको तर्फबाट नेपाल भ्रमणको निम्ता पठाउन सरकारलाई भनिसकेको छु ।
मैले चीन गएका बेलामा पनि त्यहाँका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता दिएको थिए । चीनका प्रधानमन्त्रीले त औपचारिक भ्रमण गरिसक्नुभयो अब राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता गर्नुस् भनेर सरकारलाई भनिसकेको छु ।
० गैरराजनीतिक व्यक्तिहरूको सरकार छ अहिले मंसिरमा चुनाव भएन भने के गर्नुहुन्छ ?
यस्तो अवस्थाको कल्पना नै नगरौं । राजनीतिक दलहरूले सहमति गर्न सकेनन् भनेर एउटा बाटो लिइएको हो । निश्चय पनि न्यायपालिका । कार्यपालिकाको नेतृत्व एउटै व्यक्तिले लिएर पूर्व प्रशासकहरूको सरकार बनेको छ । म के कुरामा विश्वस्त छु भने कार्तिकको अन्त्य वा मंसिरको पहिलो हप्तासम्म नेपाली जनताको चाहना अनुसार चुनाव सम्पन्न हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि त्यही चाहना छ ।
० तर नेताहरूले त संविधानसभाको विघटन नहुँदासम्म जसरी प्नि संविधान बन्छ भन्ने गरेका थिए । अहिले फेरि नेताहरूले जसरी पनि चुनाव हुन्छ भनिरहेका छन् तर केही दलहरू चुनाव विथोल्ने कुरा गरिरहेका छन् । यसलाई कसरी समायोजन गरेर जानुहुन्छ त ?
अब घटना–परिघटनाहरू भएका छन् तर सबैले महसुस गर्दैआएका छन् कि अब नेपाल र नेपाली जनतालाई धेरै दुःख दिनु हुँदैन भनेर । राष्ट्रको सफलता र नेपाली जनताको सर्वोपरि हितका लागि हामीले अरु बाटो होइन कि सर्वोपरि जनतामै जानुपर्छ ।
जहाँसम्म चुनाव विथोल्ने कुरा छ ती दहरूसंग सरकारले पनि कुरा गरिरहेको छ, राजनीतिक दलहरूले पनि कुरा गरिरहेका छन् र मैले पनि अनौपचारिक ढंगले कुरा गरिरहेको छु र म विश्वस्त छु कि सबै एउटै बाटोमा आउँछन् र राष्ट्रले गति लिनेछ भन्ने राष्ट्राध्यक्षका रुपमा मेरो चाहना पनि त्यही छ ।
० अन्त्यमा, जतिबेला एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यतिबेलाको प्रधान सेनापति प्रकरणमा तपाईले भारतले भनेको नमान्नुभएकाले भारतले तपाईंलाई सहयोग नगरेको भन्छन् नि ?
कसले के भन्छ मलाई त्यसमा चासो छैन । मभन्दा जान्ने सुन्ने तपाईं पत्रकारहरू हुनुहुन्छ, तपाईंहरू बढी अध्ययन गर्नुहुन्छ, देश–विदेशका घटनामाथि छिनछिनमा जानकारी राख्नुहुन्छ । तर म के कुरा भन्न चाहन्छु भने नेपाली जनताले जुन बाटो लिएका छन् त्यसलाई छिमेकी लगायत सबै अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समर्थन गरेका छन् । त्यसले गर्दा मलाई लाग्दैन कि– कसैले मलाई सहयोग गर्दैन भनेर । नेपाली जनताको आशीर्वादले म जुन ठाउँमा छु नेपाली जनताको सर्वोपरि हितका लागि सबैसंग राम्रो सम्बन्ध बनाएर म अघि बढिरहेको छु ।